♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: မကျည်းတန် ရဲ့ ကမ္မဖလ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများဖတ်စေချင်ပါသည်)
မကျည်းတန် ရဲ့ ကမ္မဖလ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများဖတ်စေချင်ပါသည်)
လူတွေဟာ အချို့ က လှပြီး အချို့ ကရုပ်ဆိုးတယ်၊အချို့ မှာ ချမ်းသာပြီး အချို့ မှ ဆင်းရဲတယ်။ရှုပ်ထွေးစုံ
တဲ့ လောကဇာတ်ခုံ လူတို့ ဘုံဟာ တစ်ပြေးညီတည်းရှိမနေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ဘာ့ကြောင့်များလှလှပပတွေချည်းဖြစ်မနေတာလဲ။ဘာ့ကြောင့်များချမ်းချမ်းသာသာကြီးရှိမနေရတာလဲ။
သူမဘ၀ကို စိတ်ပျက်အားငယ်မိတိုင်း ဒီအတွေးဒီမေးခွန်းတွေ ရင်ထဲအထိတိုးဝင်လာပြီး တနုံ့ နုံ့ ခံစားရစမြဲ။
ငယ်စဉ်က သူများတွေ “ခါးကုန်းတဲ့ရုပ်ဆိုးမ”လို့ စနောက်ခံရတိုင်း အမေ့ကိုငိုယို ရန်တွေ့ မိ၏။
“ကျွန်မကို ဘာလို့ ခါးကုန်းပြီးရုပ်ဆိုးအောင် မွေးခဲ့တာလဲအမေ။လှလှပပလေးဘာလို့ မမွေးခဲ့တာလဲ”။
“ဟဲ့....မိန်းကလေးရဲ့ ၊သားသမီးတွေအားလုံး အချောအလှချည်းပဲ နင်တစ်ယောက်ပဲ ဘယ် ကအဘွားကြီးဝင်စားမှန်းမသိ၊နင့်ဘာသာနင် ခါးကုန်း ပြီး ငါ့ဗိုက်ထဲက ထွက်လာတာငါကဘာတတ်နိုင်မှာတုန်း”
“ရှင်မ ဗိုက်ထဲက ထွက်လာတာဟုတ်လို့ လား..ကျုပ်အမှိုက်ပုံထဲကကောက်ပြီးမွေးစားခဲ့တာလေ၊ဒါ့ကြောင့်ခါးကုန်းပြီး ရုပ်ဆိုးနေတာပေါ့”
အမေတစ်လှည့်အဖေတစ်လှည့် သူမကို ချစ်စနိုးနဲ့ ကျီစယ်နေသောအခါ ရှိုက်ကြီးတငင်ခြေဆောင့်ငိုမိပါသည်။
“ဆင်းရဲလိုက်တာလဲ လွန်ပါရော..ဘယ်တော့များမှကျွန်ဘ၀ ကလွတ်မလဲမသိဘူး “ဃောသက” သူဌေးအိမ်မှာ နေပါလျှက်
နဲ့ သူဌေးကတော်ဝမ်းထဲ မ၀င်မိတာနာတယ်”
လိုချင်သည့် အဆင်တန်ဆာ ပူဆာ၍မရတိုင်းလဲ အမေ့ကို ထေ့ငေါ့စောင်းချိတ်မိပြန်ပါသည်။ ထိုအခါများမှာတော့အမေက ရယ်မောလျှက်..
“အဲ့ဒါလဲ နင့်ကုသိုလ်ကံပေါ့မိန်းကလေးရဲ့သူဌေးကတော်ဝမ်းထဲဝင်ခဲ့ရင် နင်လဲ သူဌေးသမီးဖြစ်ပြီးရတနာတွေ သီးနေအောင်
ဆင်ရမှာပေါ့။အခုတော့ နင်က ငါ့လို ကျွန်မ တစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းထဲဝင်လာတော့ ကျွန် ကမွေးတဲ့ ကျွန်သပေါက် ပဲဖြစ်တော့မပေါ့”
အမေ့အပြောကြောင့်အမေ့ကို စိတ်ဆိုးရမည်လား အဖေ့ကိုအပြစ်တင်ရမည်လား မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ.
သူမမှာမိန်းမသားမို့ မလှချင်ပဲရှိပါ့မလား အခြွေအရံတွေနဲ့ေ၇ွှဘုံပေါ်မစံချင်ပဲ ၇ှိပါ့မလား၊
ယခုတော့ နုံချာလွန်းလှသည့်သူမဘ၀က သူတစ်ပါးခြေဖ၀ါးအောက်ကမြေမှုန့် ...
အဖေနဲ့ အမေက သူဌေးကြီး..“ဃောသက” အိမ်က အထိန်းတော် ငယ်ကျွန်
သူမကိုယ်တိုင်က ကောသဗ္ဗီပြည့်၇ှင်“ ဘုရင်ဥတေန”ရဲ့ အဂ္ဂမဟေသီ “သာမာဝတီ” မိဖုရားကြီး
ကို ပန်းတော်ဝယ်ဆက်နေရတဲ့အထိန်းတော် ..
“အိုလေ...ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်းလဲမတွေးချင်တော့ပါဘူး”...ဟု ဦးခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ခါရမ်းပစ်လိုက်သည်။
ထိုစဉ်မှာ....“အဖွားကြီးအိုအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ ဦး” ဟု..လမ်းပေါ်က ကလေးတစ်ချို့မကြားတကြား နောက်ပြောင်
ကျီစယ်ပြန်ပါသည်။ သြော်..စဉ်းစားဖို့ တောင် မကောင်းတော့တဲ့ဘ၀ပါလားနော်.၊တစ်နေ့ လုံးထိုင်ကြည့်သော်မှ ဘ၀င်အသဲရင်ထဲငြိစရာ အလှရှာမရ၊ရုပ်ဆိုးရတဲ့အထဲ ခါးကုန်းနေတဲ့အကျည်းတန်မ..
ဒါ့ကြောင့်လူနဲ့ လိုက်အောင် နာမည်ပေးထားတာက“ခုဇ္ဇုတ္တရာ” တဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက သူမရဲ့ အားနည်းချက်ကို
ရင့်သီးစွာမခေါ်ပဲ “ဒေါ်ဥတ္တရာ” လို့ ခေါ်ကြတာမို့ ကျေးဇူးတော့တင်ရပါသည်။
သူမအသက်အ၇ွယ်ကြီးလာသည့်တိုင် ဒေါ်ဥတ္တရာ လို့ ပဲအားလုံးကနှုတ်ကျိုးနေကြပြီလေ။
သူမအလုပ်က နံက်စောစော သခင်မလေး မနိုးခင်မှာ ပန်းသည် “ဒေါ်သုမန” အိမ်မှာပန်းဝယ်ပြီး
နေ့ တိုင်းပန်းတော်ဆက်ရတဲ့အလုပ် မို့ လို့ ဒီနေ့ လဲ မင်းကြီးပေးတဲ့ အသပြာ ၈ ကျပ်ကို ကျစ်ကျစ်ဆုပ်ပြီး
ဒေါ်သုမနအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမမျက်မှောင်ကြုတ်ကာနဖူးတွန့် သွားရပါသည်။
ခါတိုင်းဆို ဒေါ်သုမန အိမ်ေ၇ှ့ မှာ ပန်းခြင်းအပြည့် ခင်းထားပေမယ့် ဒီနေ့ တော့ အိမ်ေ၇ှ့ မှာ ရှင်းလို့ ပြောင်လို့ 
အိမ်ထဲမှာတော့ စည်စည်ကားကားနဲ့ အမှိက်လှဲသူ၊ကော်ဇောခင်းသူ၊ ပန်းအလှပြင်သူတွေနဲ့ ပျာယာခတ်အလုပ်ရှုတ်နေကြသည်.
အိမ်နံဘေးခြံဝင်းထဲမှာတော့ ချက်ပြုတ်နေကြသူတွေ နဲ့ သူတို့ အားလုံးရဲ့ မျာက်နှာမှာ ပြုံးပျော်မြူးကြွနေ၏ ။
စူးစမ်းစွာနဲ့ စိတ်ဝင်တစားငေးမောမိစဉ်မှာပဲ ဒေါ်သုမန အိမ်ထဲကထွက်လာပါတယ်။
“ဒေါ်ဥတ္တရာပါလား ရောက်နေတာကြာပြီလား လှမ်းခေါ်လိုက်ရောပေါ့ ”
“ခုလေးတင်ရောက်လာတာပါ ။ဆိုင်ခင်းထားတာမတွေ့ ဘူး ဒီနေ့ ပန်းမရောင်းတော့ဘူးလား။ လူတွေလဲအများကြီးပဲ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ”
သူမရဲ့ အမေးကိ်ုဒေါ်သုမန ခေါင်းခါလိုက်သည်။
“ဒီနေ့ ပန်းမရောင်းတော့ဘူးဒေါ်ဥတ္တရာ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ ဆွမ်းကပ်လှူမလို့ စီစဉ်နေကြတယ်။ ပန်းတွေအလှပြင်ပြီးပူဇော်မယ်လေ”
သူမမျက်နှာပျက်သွားရသည်။ လာရသည့်ခရီးက နီးနီးလေးမဟုတ် ဒေါ်သုမန ဆီက ပန်းမရလို့ တခြားသွားရှာလို့ လဲ
အချိန်မရတော့ဘူး။ လူကလည်း အသက်ကလေးကြီးလာတော့ ဟိုနားဒီနားသွားတာတောင်မောချင်ချင်၊
နေ့ တိုင်းသခင်မလေးအကြိုက် ပန်းတော်ဝယ်ဆက်နေကြ။ဒီနေ့ ပန်းမရရင်တော့ သခင်မ မျက်နှာညိုပေလိမ့်မည်။
“ပန်းမရောင်းလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဒေါ်သုမနရယ်.လေးကျပ်ဖိုးတော့ရောင်းပေးပါ နေ့ တိုင်းဝယ်နေကြပဲဟာ....”
“အားတော့နာပါတယ်ဒေါ်ဥတ္တရာရယ် ပိုက်ဆံဆိုတာ နေ့ တိုင်း၇ှာနေကြပဲ မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ သာဝကတွေကို လှူရတဲ့
ကုသိုလ်ဆိုတာ အင်မတန် ကံစပ်ပြီးတိုက်ဆိုင်လို့ သာ လှူခွင့်ရတာ မလှူရသေးပဲနဲ့ ဦးဦးဖျားဖျား မရောင်းနိုင်ပါဘူး..”
“ရှင်ကလဲမရောင်းနိုင်တော့ ကျွန်မမှာ အခက်တွေ့ နေပါပြီ ဒေါ်သုမနရယ်”
သူမစကားကြောင့်ဒေါ်သုမန ဂရုဏာပြုံးဖြင့် ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“ဗုဒ္ဓနဲ့ သာဝကတွေကို ဆွမ်းကပ်မယ့်အလှူမှာ ပန်းပူဇော်မယ်ဆိုပြီးမရောင်းပဲ ဆုံးဖြတ်ထားတာ.ဒီလိုလုပ်ပါလား ဒေါ်ဥတ္တရာ
ဗုဒ္ဓကြွလာတဲ့အထိ စောင့်ပြီးတရားနာလိုက်ပါလား ပြီးတဲ့အခါ ပိုတဲ့ပန်းတွေ ရောင်းပေးမယ်လေ”
ဗုဒ္ဓဆိုသည့်အသံ၊တရားနာလိုက်ပါလားဆိုသည့် စကားကြောင့် ဦးခေါင်းကနေ ခြေဖျားထိ ကြက်သီးမွေးညင်းများထသွားပြီး
တရားနာနေလျှင် အ၇ှင်မအဆောင်သို့ ပန်းဆက်ဖို့ နောက်ကျပေလိမ့်မည်။စိတ်ဆိုးလျှင်လဲဆိုးစေတော့။
မျက်မာန်တော်၇ှလို့ အပြစ်ပေးလျှင်လဲ ခံလိုက်ရုံသာ။ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်ကို နာကြားခွင့် ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြော်ခွင့်ရဖို့ ဆိုတာ ကြုံခဲပါဘိခြင်း၊
သူမခေါင်းကို သွက်သွက်လေးညိတ်ပြီး ဒေါ်သုမနနဲ့အတူအိမ်ထဲလိုက်ဝင်လာခဲ့၏။ တစ်အိမ်လုံးပန်းအမျိုးမျိုးတို့ ၏ရနံ့ များဖြင့်သင်းပျံ့ ကြိုင်လှိုင်နေ၏ ရွှေနန်းတော်ကြီးလိုမခမ်းနားသော်လည်း ဆင်းရဲသားတို့ ဘ၀ မှာလဲ သန့် သန့် ပျံ့ ပျံ့ နဲ့ 
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ နဲ့ သာဝကတို့ ကြွတော်မူလာသောအခါ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆင်းကျက်သရေတော်ကို ကြည်ညိုလျှက် ဂုဏ်တော်၌ သက်ဝင်မိသောကြောင့် မျက်တောင်ခတ်ရန်ပင်မေ့လျော့နေသည်။ သာယာကြည်လင်ချိုမြသောအသံဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားဟောနေစဉ်
သူမမှာ တစ်ခုတည်းသော “ဧကဂ္ဂတာ” တည်ငြိမ်သောစိတ်ဖြင့် နာယူပြီး အလွတ်ရသည့်တိုင် တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ မှတ်သားထားလိုက်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်လက်ခံရမယ်လို့ ဟောခဲ့တာပဲ။လူသားတွေနဲ့ လောက တစ်ပြေးညီမရှိမှုကို ဘယ်တန်ခိုး
ရှင်ကမှ ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကံကပစ်ချပေးလိုက်တဲ့ ကမ္မမျိုးစေ့ကနေပြီး သန္ဓေတည်မွေးဖွားလာသူချည်းသာဖြစ်ပါသတဲ့။
အာရုံအတွေ့ မှာ ခံစား၊ ခံစားတော့လိုချင်၊ လိုချင်တော့ စွဲလမ်း၊ စွဲလမ်းတဲ့အတွက်ပြုလုပ်၊
ပြုလုပ်တာကြောင့်ပဋိသန္ဓေ နေမှု ဖြစ် ......အဲ့ဒီမှာ ဘ၀ဆိုတာ ကမ္မ ဘ၀ပါပဲ..စေတနာပါတဲ့ပြုလုပ်မှုကို ပါဠိလို ကမ္မလို့ ခေါ်တယ်။ ကမ္မကနေပြီး ကံ..ဆိုတဲ့စကား ဖြစ်လာတာပဲ..
ကံကောင်းချင်ရင် ကောင်းတာကိုလုပ် တစ်နေ့ မှာ ကောင်းကျိုးခံစားရလိမ့်မယ်။ မကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ မကောင်းကျိုးခံစားရပြီး ကံမကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတာပဲ။ကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ
မိမိတို့ ရဲ့ ...အပြုအမူ..အပြောအဆို..အကြံအစည်..ကောင်းမကောင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်မူတည်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲဘယ်သူမပြုမိမိမှု
ဆိုတဲ့ စကား ရှိခဲ့တာပဲ.။တဏှာ မာန ဒိဌိ ဆိုတဲ့ ပပဉ္စ မျက်လုံးနဲ့ ဘ၀ကို အနုလောမ ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ
လို့ မြင်တယ်။ တဏှာမျက်စိနဲ ကြည့်ရင်ဘ၀ ကို တက်မက်စရာလို့ မြင်တယ်။ မာနမျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်မာန်တက်စရာလို့ မြင်တယ်၊ ဒိဌိမျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဘ၀ဟာ အားကိုးစရာပေါ့။ဒါ့ကြောင့်လူတွေဟာ ဘ၀ ကိုတက်မက်နေကြတယ်။ မာန်တက်နေကြတယ် အားကိုးနေကြတယ်လေ။
ညဏ်ဦးစီးတဲ့ ပဋိလောမ ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ဘ၀ဆိုတာ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ အစုအဝေးသာဖြစ်တယ်။ မဂ္ဂင်မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်တော့
စက္ကန့် တိုင်း စက္ကန့် တိုင်းမှာ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက် ၇ှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်သာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမတည်မမြဲ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀ဟာ တက်မက်စရာလဲမဟုတ် မာန်တက်စရာလဲမဟုတ် ၊အားကိုးစရာအခိုင်အမာလဲ တစ်ကယ်မဟုတ်ပါဘူး၊
လောကကို အဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကမှ ပြုနိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်၊ ဖြစ်လာသမျှသော အကျိုးဝိပါတ်တို့ ၏အကြောင်းကံတရားသည်
ကံကောင်းသူဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်သာဖန်တီးနိုင်၏ ဘယ်ဖန်းဆင်း၇ှင် ကမှ မဖန်တီးပေးနိုင်ပါ။
ကံဆိုးသူဖြစ်အောင်လည်း မိမိသည်သာ စွမ်းနိုင်ပါ၏ ဘယ်ဖန်ဆင်း၇ှင် တန်ခိုးရှင်ကမှ မိမိကို ကံဆိုးအောင် မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
..မိမိသည်ပင်လျှင် မိမိဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်..
မိမိဘ၀ကိုလှပစေချင်ရင်တော့ ဒါန သီလ ဘာဝနာ စတဲ့ကုသိုလ် အလင်းလေးထွန်းညှိမှ ကိုယ်တိုင်က လင်းလက်တဲ့ ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကို ခံစားရမှာပဲ။“အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော” မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ တဲ့
မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ ပဋိလောမ ရှုထောင့်က ညဏ်အမြင်နဲ့ မိမိဘ၀ကို သုံးသတ်သွားဖို့ အင်မန်မှာအရေးကြီး လှပါသည်”။
အယူမှားသော တိတ္ထိတို့ ၏လမ်းစဉ် “သီလဗ္ဗတာပရာမာသ” လည်း ဘ၀ဘ၀ မကပ်ငြိတော့ပြီ။
ဒေါ်ဥတ္တရာတစ်ယောက် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှမကျန် အကုန် မှတ်မှတ်သားသားဖြင့်နာယူခဲ့ရ၏
တရားပွဲအဆုံးမှာ “သောတပတ္တိဖိုလ်”တည်ကာ သူမမှာ အရိယာနွယ်ဝင် သူတော်စင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
“သောတပန်” ..ဟူသည် မိမိအသက်နှင့်လဲလှယ်ကာ ပဉ္စသီလ ဆိုတဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုမြဲမြံခိုင်ခံ့စွာ စောင့်ထိန်းကြပါသည်။
တစ်ပါးသူအပေါ်၌ ငရဲကျသည်အထိ မနာလိုစိတ် ၀န်တိုစိတ် လည်း မရှိတော့ပေ။ အယူမှားခြင်း“မိစ္ဆာဒိဌိ”လည်း
တစ်သက်တာအပြတ်ခွာ၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ (သီလ သမာဓိ ပညာ) သိက္ခာသုံးပါး၊ အတိတ်သံသရာ၊ အနာဂတ်သံသရာ၊
အတိတ်နှင့်အနာဂတ်သံသရာ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် တရား....ဤရှစ်ပါး တို့ ၌ ၀ိစိကိစ္စာ ယုံမှားသံသယ ရှိခြင်းကိုလည်း
ဗုဒ္ဓကိုဖူးတွေ့ ပြီး ၍ ဗုဒ္ဓတရားကိုနာကြားပြီးသောအခါ ၀ယ် သူမဘ၀ ရဲ့ ဆိုး၇ွားလှတဲ့ကံအကြောင်းတရားဟာ
တရားတည်းဟူသော ဓမ္မဆေးဖြင့် လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ ခြေလှမ်း များတောင် သွက်လက်နေပါပကော။
လက်ထဲမှာ အသပြာရှစ်ကျပ်ဖိုးအပြည့်ဝယ်လာသော ပန်းများနှင့်အတူသူမရဲ့ စိတ် များကလန်းဆန်းတက်ကြွလျှက်..
“ပန်းတွေ များလှချည်လားအမေ..မောင်တော်မင်းကြီးက ဒီနေ့ ပန်းဖိုးပိုပေးလိုက်လို့ လား”
အိမ်တော်ပါငယ်ကျွန်မို့ လို့ သူမကို သာမာဝတီ မိဖုရားက ရိုသေချစ်ခင်စွာနဲ့ “အမေ” လို့ ခေါ်တတ်၏။
အ၇ှင်မလက်ထဲကို ပန်းကိုပေးပြီးနောက် ပြုခဲ့မိသောအပြစ် တစ်စုံတစ်ရာကိုအမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမည်မို့ခေါင်းကိုငုံ့ ချလိုက်သည်။
ရင်ထဲမှာ ပူလောင်ခြင်း တော့မရှိ။အမှန်တရားကိုသူမရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
သောတပန်တို့ မည်သည် ..ငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကို အသက်နဲ့ လဲ၍ စောင့်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
“ဘုရင်မင်းမြတ် ပန်းဖိုးပိုမပေးပါအရှင်မ ၊နေ့ စဉ်အ၇ှင်မအတွက်ပန်းဖိုး အသပြာ ၇ှစ်ကျပ်ပေးနေကျပါ။
ဒါပေမယ့်ခါတိုင်းနေ့ တွေမှာ လေးကျပ်ဖိုးသာ ၀ယ်ပြီး ကျန်တဲ့လေးကျပ်ဖိုးကိုတော့ ကျန်တော်မျိုးမ နေ့ စဉ် ခိုးယူခဲ့မိပါသည်။
ပန်းသည်ဒေါ်သုမန ရဲ့ အိမ်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကိုနာယူခဲ့ရလို့ခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့ မကောင်းမှုပြုဖို့့..ကြောက်လို့ 
ငါးပါးသော သီလတော်မြတ်ကို အသက်နဲ့ လဲပြီးစောင့်ထိန်းတော့မှာမို့ပန်းဖိုးရှစ်ကျပ်ကို မခိုးမ၀ှက်ပဲ အကုန်ဝယ်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်မပေးလိုသောအပြစ်တော်ကို ပေးတော်မူပါ ခံယူဖို့ အသင့်ပါ”။
“ဒီလိုဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို နာနေလို့ နောက်ကျတယ်ပေါ့....ဟုတ်လား”
“နေ့ တိုင်း အသပြာ လေးကျပ်ခိုးယူမှု နဲ့ ဒီနေ့ ပန်းဆက်နောက်ကျ တဲ့အတွက် အပြစ်ဒဏ် ပေးရလိမ့်မယ်”။
နှလုံး လှုပ်ရှား အခုန်များလျှက် မျက်နှာကို အောက်ချထားလိုက်သည်။
ထားလျှင်ရှင်..သတ်လျှင်သေ သူတို့ လက်ခုပ်ထဲကရေမို့ ဘာမျှမတတ်နိုင် ။ဖြစ်လာသမျှ ကံအကြောင်းတရား ပါပဲ ဟုအောက်မေ့ကာသာနေတော့သည်။
“ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို တဆင့်ပြန် ဟောနိုင်မလားအမေ”
အရှင်မ၏ အပြုံးများသည် နူးညံ့လွန်းပေစွ..။
“ဟောပြနိုင်ပါတယ်...အရှင်မ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေ ကို ကျွန်တော်မျိုးမ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှမကျန် ရအောင်မှတ်သားနိုင်ခဲ့ပါတယ်..
“ဒါပေမယ့် ..ဘာဖြစ်လို့ လဲအမေ”
“လောကရဲ့ အထွတ်အထိပ် ဖြစ်တော်မူသော မြတ်ဘုရားရဲ့ တရားကို ဟောကြားဖို့ ရာ မြင့်တဲ့နေရာ မြတ်တဲ့နေရာ မှာ
သာသင့်တော်ပါတယ်..ကျွန်တော်မက ကျွန်မို့ လို့ အောက်မှာနေပြီး အရှင်မက အမြင့်မှာထိုင်ပြီးတရားနာတာမသင့်တော်လို့ ပါ”
“ဒီ့အတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ အမေ ဘုရင့်မိဖုရားမို့ လို့လောကအမြင်မှာ မသင့်တော်ဘူးပဲထား..မြင့်မြတ်တဲ့တရားတော်ကို
ရိုသေလေးစားတဲ့အနေနဲ့အနိမ့်မှာ ထိုင်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး”
အ၇ှင်မ၏ သလွန်ညောင်စောင်းကို တရားဟော ပလ္လင် အဖြစ်ပြင်ဆင်လိုက်၏ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အမွှေးနံ့ သာဖြင့်
သန့် စင်လိုက်၏။ ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်ကို ရည်မှန်းကာ ပလ္လင်ပေါ်ကျစ်လျစ်စွာ ထိုင်ချလိုက်သည်။
ပလ္လင်ရှေ့ ကြမ်းပြင်မှာတော့ အ၇ှင်မနှင့် တကွ အခြွေအရံသင်းပင်များ ကိုင်းညွှတ်သောကိုယ်ဖြင့် လက်အုပ်ချီလျှက်
“မူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓကိုပထမရှိခိုးပါ့မယ်။ ဗုဒ္ဓကိုနှလုံးသွင်းလက်အုပ်ချီပြီး ရိုရိုသေသေနာယူပါ. ကျွန်တော်မရဲ့ 
ရုပ်ခန္ဓာကို ပဓာနမထား အာရုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲ တရားတော်ကို သာလေးလေးနက်နက်နားစိုက်ပါ”
ဗုဒ္ဓထံတော်ပါးမှ နာကြားမှတ်သားခဲ့ရသမျှကို တစ်ပုဒ်တစ်ပါဒမျှမကျန် အောင် သေချာဃနစွာ အစဉ်အတိုင်းဟောပြလိုက်ရာ
တရားတော်၏အဆုံးတွင် အ၇ှင်မနှင့်တကွ ရံေ၇ွတော် အားလုံးတို့ သည် “သောတပတ္တိဖိုလ်” ၌ တည်ကာ အရိယာနွယ်ဝင်
ရုပ်ဆိုးပြီး အကျည်းတန်လှတဲ့ခါးကုန်းမ “ခုဇ္ဇုတ္တရာ” ရဲ့ အတွင်းအဇ္ဈတ ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့မနောအလှကို သူတို့ တွေ့ မြင်ခဲ့ပါပြီ။
တရားတော်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကြရပေပြီ။ သူမအား အရှင်မမှ အခိုင်းအစေ အထိန်းတော်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ခွင့်
ပေးလိုက်ပါပြီ။တရားတော်နဲ့ သီလရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သူမ ကျွန် ဘ၀မှကင်းလွတ်ရပါပြီ။
“အို..အမေ.ပြုဖွယ်ကိစ္စမှန်သမျှ ဘာမျှမလုပ်ပါနဲ့ တော့ အမေ၊ မိခင်အရာမှာနေပြီး ဆုံးမသွန်သင်ပါ။ဆရာအဖြစ်နှင့်
နည်းပေးလမ်းညွှန်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟောကြားသမျှတရားတော်များကို သမီးတော်တို့ ကိုယ်စား သွားရောက်နာကြားပြီး တဆင့်ပြန်လည်ဟောပြောပေးဖို့ အမေတာဝန်ယူပေးပါ”
သူမအား အရှင်မကအစ မိခင်နေရာမှာထားပြီးဆည်းကပ်ရိုသေမှုပြုကြလေပြီ။သူမ၏ရုပ်နာမ်အစုသည် ကြည်ညိုဖွယ်မဟုတ်
သီလ သမာဓိ သိက္ခာ ပညာ ဆိုတဲ့ ဓမ္မတရား ကိန်းဝပ်နေသော စေတီအိမ်ကြီး အဖြစ် မြင့်မြတ်သောဂုဏ်ဆောင်ခြင်းသည်သာလျှင် ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါ၏။
ထိုအချိန်ကာလကစပြီး သူမမှာ နေ့စဉ်ပန်းတော်ဝယ်ဆက်ရမည့်တာဝန်အစား ကောသဗ္ဗီပြည်အတွင်းဗုဒ္ဓကြွမြန်းတော်မူလေရာ
သွားရောက်ဖူးတွေ့ ပြီး တရားနာရစမြဲ။ဗုဒ္ဓဟောတော်မူအပ်သော ဓမ္မဂါထာ အဖြာဖြာကို နာယူမှတ်သားခွင့်ရစမြဲ။
နာအပ်ပြီးသော တရားတော်တို့ ကိုလည်း ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်တိုင်ဖူးမြော်ခွင့် မရရှာသော အရှင်မနှင့်အခြွေအရံများအားတဆင့်ပြန်လည်ဟောပြောခွင့်ရပါသည်။
သူမသည် မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော် ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါနာကြားရုံဖြင့် အာဂုံဆောင်ပြီးပြန်လည်ဟောပြနိုင်သော
သူမ၏ ထိုးထွင်းညဏ်နှင့်ပါရမီကို မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ကပင်ချီးကျုးလျှက်
“အကြားအမြင် ဗဟုသုတ အရာတွင် အသာဆုံး အမြတ်ဆုံး ဧတဒဂ် ဘွ့ဲ” ကို ပေးသနားတော်မူ၏။
စုစုပေါင်း(၁၁၂)သုတ် ၇ှိပြီး က္ကတိဝုတ္တပါဠိတော် ဟူသောအမည်ဖြင့် သင်္ဂါယနာတင်ရာတွင် ပါဝင်သည်အထိ ပိဋိကတ်တော်တွင်
စာတင်ခံရသော စံပြ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်.။
ဤကဲ့သို့ မြတ်စွာဘုရားချီးမြှင်တော်မူသော “ဧတဒဂ်” ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ ကို သူမအချီးအနှီးရခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ခါးကုန်းပြီး ရုပ်ဆိုးသော ကျွန်မ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရတာလဲ
တမင်ရောက်ခဲ့ရခြင်းမဟုတ်ပါ။အတိတ်ဘ၀က သူမကိုယ်တိုင် ပြုခဲ့သော ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံ ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးဆက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။
“ခုဇ္ဇုတ္တရာ ”မည်သော သူမသည်..ပဒုမုတ္တရ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါက ပင် ဧတဒဂ်ဆု ကိုပန်ဆင်ကာ နိတယဗျာဒိတ် ရခဲ့ပြီးသူဖြစ်ပါသည်။
ထိုကာလမှစပြီး ဘ၀တစ်သိန်းပတ်လုံး သူဌေးသမီးအဖြစ် လူ့ ပြည်မှာ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ၊နတ်ပြည်မှာ ဘ၀ပေါင်းများစွာ၊ ကာမသုဂတိ ဘုံတို့ ၌သာ အခါခါကျင်လည်ခံစား
ခဲ့ရပါ၏ ဤဘဒ္ဒ ကမ္ဘာမှာ ကဿပမြတ်စွာဘုရား၇ှင် ပွင့်တော်မူသည့်အခါ ဗာရာဏသီပြည်တွင် သူဌေးသမီးဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်. ထိုသူဌေးသမီးနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော
အာသဝေါကုန်ခမ်းပြီးနေသည့် ရဟန္တာ ထေရီတစ်ပါးသည် ညနေချမ်းအချိန်တွင် သူဌေးသမီးဖူးမြော်ခွင့်ရစေရန် ရောက်လာပါသည်။
သူဌေးသမီးကားကြေးမုံထက်တွင် အလှပြင်နေဆဲမို့ အနီးအနားမှာ ခိုင်းစေရမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှမရှိ၊ရဟန္တာ ထေရီမက မလှမ်းမကမ်းမှာ ထိုင်လိုက်သည်။
တပည့်တော်မ အလှပြင်ဆဲမို့ ဝစီကံမနောကံနဲ့ ပဲ ၇ှိခိုးပါသည်။တပည့်တော်မကိုသနားသဖြင့် လက်ဝတ်လက်စာ ဘူးလေး
ယူပေးပါဦး.ညောင်စောင်းပေါ်က ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ရှိပါတယ်။ရိုင်းပျကြမ်းတမ်းစွာ အမိန့် ပေးခိုင်းစေမျိုးလည်းမဟုတ်ပါ.
ထိုအခါရဟန္တာဖြစ်တော်မူတဲ့ ထေရီမက သူမရဲ့ေ၇ှ့ ရေးကို ကြံဆတွေးမြင်တော့.
“ဒီမိန်းကလေး သူခိုင်းတာကိုယူမပေးရင် ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးရန်ငြိုးဖွဲ့ ပြီး ငရဲရောက်တော့မှာပဲ။ယူပေးပြန်ရင်လဲ သူတစ်ပါးရဲ့ ကျွန်
ဘ၀ရောက်ရလိမ့်မယ်။ငရဲကျတာနဲ့ စာရင် ကျွန်ဖြစ်ရတာတော်ချည်းသေးရဲ့ လို့ တွေးမိပြီး သူဌေးသမီးခိုင်းတာယူပေးလိုက်ပါသည်။
ရဟန္တာမြတ်ဖြစ်တော်မူသောသူတော်ကောင်းတို့ မည်သည် မိမိအကျိုးထက် သူတစ်ပါးအကျိုးကို အမြဲကြည့်တတ်ပါသည်။
အမှတ်တမဲ့လေးခိုင်းစေမိခဲ့သော်လည်း သူမခိုင်းစေလိုက်သူမှာ ကိလေသာပြည့်နေတဲ့ သာမန်လူမှမဟုတ်ပါဘူး။
သီလ သမာဓိ သိက္ခာ ပညာ နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အရိယာနွယ်ဝင် ရဟန္တာဖြစ်သောကြောင့် ဘ၀ ပေါင်း ၅၀၀ တိတိ သူတစ်ပါး၏အိမ်တွင်
“ခုဇ္ဇုတ္တရာ”မည်သော သူမ ခါးကုန်းရသည်က သဗ္ဗင်ညုတဘုရားရှင်တစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူကြား သာသနာပ အခါကာလများတွင်
ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်များပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်။
ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဆိုတာက.....သစ္စာလေးပါးတရားကို ကိုယ်တိုင်ပဲသိပြီးသူတစ်ပါးကိုမဟောပြနိုင်ပါဘူး။ဘုရားတော့ဘုရားပါဘဲ.နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဘုရားငယ်ပေါ့.
သမ္မာသဗ္ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓွါ..ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို ကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိပြီး ဝေနေယျသတ္တ၀ါအများကိုနားလည်အောင်ဟောပြနိုင်ပါတယ်။
ဂေါတမဆိုတဲ့သမ္မာသဗ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားမပွင့်မီဗာရာဏသီပြည်မှာ ဗြဟ္မဒတ်မင်းပြုစဉ်အခါက သူမဟာ ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ မောင်းမမိဿံ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။နန်းတော်သို့ ဆွမ်းခံကြွလာသော ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ အ၇ှင်မြတ်၇ှစ်ပါးအနက် တစ်ပါးသည် ခါးအနည်းငယ်ကုန်းနေ၏ ဤသည်ကိုမြင်သော မောင်းမငယ်သည် ကမ္မာလာရုံ၍ရွှေခွက်ကိုကိုင်ကာ ခါးကုန်းသော ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအသွင်ပမာ လှည့်လည်လျှက် သူငယ်ချင်းများအား ကုန်းကွကုန်းကွ လုပ်ပြကာ အရှင်မြတ်နောက်ကွယ်တွင် လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြု၍ဟားတိုက်ရယ်မောခဲ့ပါသည်။ သူတော်ကောင်းတို့ အားလှောင်ပြောင်စော်ကားမိသော အကုသိုလ်ကံ
စေတနာကြောင့် သူမမှာ ခါးကုန်းမ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရပါသည်။
မပြောပလောက်သော အသေးအမွှားဟုထင်မိမှားကာ အမှတ်တမဲ့ပြုခဲ့သော မကောင်းမှု၏အကုသိုလိကံ အကျိုးဝိပါကသည်
ရံဖန်ရံခါ ဘ၀သံသရာတစ်လျှောက် ကျောကော့အောင်ခံရတတ်သည်။ မြွေပွေးကိုငယ်သည်ဟုအလမ္မယ်မပြပါနှင့်
ဆိုသည့်စကားအတိုင်း အကုသိုလ်ကံကိုလည်း ဒါလေးများဟု ယောင်မှားကာ မပြုမိဖို့ သင်ခန်းစာယူဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
ဗာရာဏသီနန်းတော်တွင်းဝယ် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်များရှစ်ပါးအားနို့ ဃနာဆွမ်းပူကို သပိတ်အပြည့်လောင်းလှုလိုက်ရာ
အ၇ှင်မြတ်များမှာ ပူလွန်းသောကြောင့် လက်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပြောင်းကာကိုင်ကြရကုန်သည်။အရှင်မြတ်တစ်ပါးအားခါးကုန်းဟန်ပြ၍လှောင်ပြောင်ခဲ့သောသူမသည် အရှင်မြတ်တို့ လက်အပူသက်သာစိမ့်သောငှာ မိမိ၏လက်ကောက်ရှစ်ဖက်ဖြင့် သပိတ်ခြေပြုရန်လှုဒါန်းပြီး
“အ၇ှင်ဘုရားတို့ သိသော တရားများ သိရပါလို၏” ဟုဆုတောင်းတောင်းခဲ့ဖူး၍ ယခု ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက် ခါးကုန်း၍အရုပ်ဆိုးစေကာမူ “အကြားအမြင်ဗဟုသုတဧတဒဂ်”ဘွဲ့ ထူးကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်သည် ဆင်းရဲချမ်းသာမခွဲခြားပါ.မျက်နှာကြီးငယ်မလိုက် ..အရုပ်ဆိုး ရုပ်လှတာနဲ့ မဆိုင်
မျိုးရိုးအဆင့်အတန်း မရှိ ဂုဏ်အနိမ့်အမြင့်မရှိ အတိတ်ဘ၀က ပြုခဲ့ဖူးသည့်ကုသိုလ်၊ပန်ဆင်ခဲ့ဖူးသည့်ဆုထူးနှင့်
ဖြည့်ဆည်းခဲ့သောပါရမီအထုံတို့ သည်သာ ပဓာနဖြစ်လေရာ ..
ခါးကုန်းပြီးအရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှတဲ့ သူမမှာ“ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ထူးရသော အမျိုးသမီးဆယ်ဦး” တွင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့လေသည်။
အဘယ်မှာလျှင် ဆင်းရဲသဖြင့် အားငယ်စရာလိုပါတော့အံ့နည်း။ အဘယ်မှာလျှင် ခါးကုန်းရုပ်ဆိုးသဖြင့် ၀မ်းနည်းဖွယ်၇ှိပါတော့အံ့နည်း။
ဘ၀ဟူသည်..အတိတ်သံသရာမှာ မိမိပြုခဲ့သည့်(ကောင်းမှု..မကောင်းမှု) ကံစီမံရာအတိုင်းသာခံကြရ၏ ကံကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တတ်သောကံကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်မှာကား ၀ိပဿနာ ညဏ်သာလျှင်ဖြစ်ပေတော့သည်.။
ဒီပိုစ့်လေးက မလေးငြိမ်ရဲ့ (အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ) ထဲက သံဝေဂယူစရာကောင်းတဲ့
“ခုဇ္ဇုတ္တရာ”ရဲ့ ရာဇ၀င်လေးပါ။မြတ်စွာ ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ
စံပြုထိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး ဆယ်ဦး ရှိပါတယ်။
(၁) သာမာဝတီ မိဖုရား...“အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးမေတ္တာရှင်(မေတ္တာဝိဟာ၇ီ) ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၂)ခုဇ္ဇုတ္တရာ ကျွန်မ........“အကြားအမြင် ဗဟုသုတ အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၃)သူဌေးမလေးဥတ္တရာ...“မေတ္တာဈာန်ဝင်စားရာမှာ အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၄)သူဌေးသမီး...သုဇာတာ..“ပထမဦးစွာသရဏဂုံတည်သောအရာဝယ် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၅) ရဟန်းအမကြီး ကာတိယာနီ... “သာသနာတော်ကိုမတုန်မလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်သည့်အရာတွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၆)ဥပါသိကာမ....ကာလီ..“တဆင့်ကြားရုံဖြင့် ရတနာသုံပါအား ကြည်ညိုသောအရာတွင် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၇)ဥပါသိကာမ သုပ္ပိယာ....“သူနာကိုထူးချွန်စွာပြုစုသော အရာဝယ် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး (ဂိလာနုပဌာကီ )ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၈)သုပ္ပ၀ါသာ(ရှင်သီဝလိ မယ်တော်) “မွန်မြတ်သောလှုဖွယ်ဝတ္ထုတို့ ကို ပေးလှူသောအရာဝယ် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတဒဂ်ဘွဲ”့ 
(၉)ကျောင်းအစ်မကြီး ၀ိသာခါ.“မြတ်ဘုရားနှင့်သံဃာတော်တို့ ကိုအလုပ်အကျွေးပြုရာတွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး ဒါယိကာ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ”
(၁၀)နကုလ၏မိခင်(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘ၀ဟောင်းမှ မိခင်) “ခင်ပွန်းအပေါ်၌မေတ္တာသစ္စာကြီးမားသော၊ ခင်ပွန်းသည်အားတရားဓမ္မဖြင့်ဆုံးမတတ်သောစံပြ ဇနီးကောင်းဆု”
အဲ့ဒီစံပြုထိုက်တဲ့ ဆယ်ဦးထဲက .သံဝေယူစရာ မှတ်သားစရာ အတုယူစရာ ကောင်းတဲ့ သူတွေက
ကျန်တဲ့ သုးံယောက်အကြောင်းကို ဗဟုသုတရဖို့နောက်လတွေမှာ ချမ်းချမ်းပိုစ့်အဖြစ်တင်ပေးပါ့မယ်..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များအတွက် မှတ်သားထားရမယ့်အချက်က ...
့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့ ဓမ္မ ဟာ
အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းမရှိဘဲ ကျိုးစားအားထုတ်မှု မရှိဘဲ အချောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ။
လိုချင်တာကို လက်ဖြန့် ဆုတောင်းတိုင်း ရတဲ့ အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။
မြတ်စွာဘုရားဟာ ဖန်ဆင်းရှင် တန်ခိုးရှင် God . Godhead မဟုတ်လို့ ပါဘဲ.။ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လေးလေးနက်နက်မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး (အရှင်ညာဏိဿရ) က
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားထားထားတဲ့ “Dhama” ဆိုတဲ့ “တရား'' သည် “ Religion" မဟုတ်ပါတဲ့...
Religion for Belief,Worship,and Prayer . ယုံကြည်မှု .ကိုးကွယ်မှု. ဆုတောင်းမှု တွေပြုတာဟာ Religion ပါ။
ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ''Dhama"မှာတော့ ယုံကြည်မှု = belief,ကိုးကွယ်မှု = worship,ဆုတောင်းမှု =prayer .ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးမပါပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့ “Dhama” မှာတော့..
For Learning.......သင်ကြားဖို့ 
For Practice........ ကျင့်ဖို့ 
For Penetration....ထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ 
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ လောကီ လောကုတ္တရာ ချမ်းသာခြင်းတွေကို
ကိုယ်တိုင်က ကျင့်ကြံ ကြိုးစားရမယ်..ပြီးတော့
ကိုယ်ပိုင်ညဏ်နဲ့ မှန်ကန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ရပါလိမ့်မယ်..
စစ်မှန်တဲ့ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာကို ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာ၊ သီလ သမာဓိ သိက္ခာ ပညာ နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သံဃာကောင်းတွေ
ဒီခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာ
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လမ်းပေါ်ရောက်ပြီး ပျက်စီးနေတာ
ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတာကို လူတွေက အစိုးရ မကောင်းတာလို့ ပဲ အပြစ်တင်ကြတာများတယ်.နော်.
ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်.အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ထိုင်းဘုရင် ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက ချစ်ကြပါတယ် .
မင်းကျင့်တရား (၁၀)ပါးနဲ့ လဲ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်.စီးပွါးရေးလဲ ကောင်းကြပါတယ်.
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားတော့ လူတိုင်းမကောင်းပါဘူး.စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ဆင်းရဲသားလဲ အများကြီးပါပဲ။
သူခိုးဂျပိုး မုဒိမ်းသမားလဲအများကြီးပါဘဲ။ ဒါကို ဘုရင်အသုံးမကျလို့ ပြောလို့ ရလား။
ကဲ ချမ်းသာတဲ့ အမေရိကားလိုအနောက်နိုင်ငံကလူတွေရော တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုက်ဆံကိုကိုင်ခွင့်ရနေတာပဲ
လိုချင်တာ လွယ်လွယ်နဲ့ ရနေတာပဲ.ဘာလို့ များ
လိင်မှုကိစ္စတွေ .ရာဇ၀တ်မှုတွေ လူသတ်မှုတွေ
များနေရတာလဲ..အဲ့ဒါလဲ သမ္မတကြောင့်လို့ ပြောလို့ ရလား..
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က ကျင့်ရတာလေ.
ကိုယ့်သိက္ခာ ဆိုတာလဲ ကိုယ်တိုင်က ထိန်းရတာလေ
ချမ်းသာဖို့ ကိုယ်တိုင်က အလုပ်ကြိုးစားရတာလေ.
“Money is Second God!” ငွေဟာဒုတိယ ဘုရားသခင်တဲ့..
အဲ့ဒီငွေကြောင့်ပဲ လူတွေ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြရလေ.
ကိုယ့်ကိုယ် စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေတစ်ကယ် ပေးလား..သေချာစဉ်းစားပါ.
မြန်မာနိုင်ငံ ဖာနိုင်ငံဖြစ်လာပြီဆိုတာ တစ်ကယ်ပဲလား.
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆိုမာလီယာလို ပူပြင်းခြောက်သွေ့ တဲ့ရေမြေမဟုတ်ပါဘူး.
သီးပင်စားပင်တွေ အိမ်တိုင်းစိုက်ပျိုးနိုင် ပါတယ်..
ချဉ်ပေါင်ရွက် ကန်စွန်း၇ွက်များဈေးကြီးလိုက်တာတဲ့ ။
ကိုယ့်အိမ်က ပိုတဲ့မြေကွက်လေးမှာ ချဉ်ပေါင်.ငရုတ်ပင်တော့စိုက်လို့ ရပါသေးတယ်.။
ခြံစည်းရိုးလေးမှာ ဗူးပင်လေး သခွားပင်လေး စိုက်လို့ ရသေးတယ်။
အမေမွေးထားတဲ့ခြေလက်နှစ်ဖက်က သမာအာဇီဝနဲ့ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ချမှတ်ထားတဲ့ လောကလူသားချမ်းသာဖို့ အခြေခံ ကျင့်ဝတ် (၅)ချက်က
သူ့ ဥစ္စာ ခိုးယူခြင်း
သူတစ်ပါးသားမယားပြစ်မှားစော်ကားခြင်း(သူတစ်ပါး မရင်ငယ် လင်ငယ် နေခြင်း)
ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်လေးသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ကြဖို့ ပဲလိုတာပါ.
လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာစိတ်နဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖေးမကူညီနိုင်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
သမာအာဇီဝ နည်းနဲ့ စီးပွါး ၇ှာတတ်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ ကို မှန်ကန်တဲ့ အမြင်နဲ့ ပြုပြင်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
အ၇ှင်ဇ၀န(မေတ္တာ၇ှင်ရွှေပြည်သာ) ကလောကမှာ လူ သုံးမျိုး ၇ှိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ“ခုဇ္ဇုတ္တရာ” ကို သံဝေဂယူပါ.
ဒီဘ၀မှာ ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကို အတိတ်က အကုသိုလ်ကံလို့ မှတ်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်ပါ။
လက်ရှိဘ၀ကို ပဲ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေရှိအောင် ကြိုးစားပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ..
ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆင်းရဲတာ သနားမယ့်သူ၇ှိပါတယ်.
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးတာ သိက္ခာ ဆင်းရဲတာ သနားမယ့်သူမ၇ှိ ပါဘူး.
ဘ၀မှာ လူချမ်းသာဖို့ ထက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ရှိအောင် နေတတ်မှ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရကျိုးနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
မြန်မာအမျိုးသမီးများ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြပါစေလို့ 
***Difference Between Having And Living***
***ဘ၀တွင်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနှင့် လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် နေထိုင်ခြင်းတို့ ၏ ခြားနားချက်ကိုသိပါ***
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 1:46 AM